दुःखद खबर: ‘ऋचा तिमीले के गरेको ? आत्महत्या समाधान होईन ।’ फेसबुकमा यस्तो लेखेर टाढा गईन्, साथीसँगी स्तब्ध । – नेपाली सूर्य
दुःखद खबर: ‘ऋचा तिमीले के गरेको ? आत्महत्या समाधान होईन ।’ फेसबुकमा यस्तो लेखेर टाढा गईन्, साथीसँगी स्तब्ध ।
October 22, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on दुःखद खबर: ‘ऋचा तिमीले के गरेको ? आत्महत्या समाधान होईन ।’ फेसबुकमा यस्तो लेखेर टाढा गईन्, साथीसँगी स्तब्ध ।
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ५ कार्तिक / झापाकी ऋचा सेढाइको प्रोफाईल इन्ट्रो मै देखिन्छ “Hell yeah , One more fan cheking my profile”
तर, उनको फ्यानले उनको तस्विर हेर्न आईतबार प्रोफाईल खोलेका छैनन् । सुन्दर रुपकी धनी ऋचाले स्वहत्या गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा छाएपछि उनको नाम सर्च गरेर आत्महत्या समस्याको समाधान होईन भनेर कमेन्ट र पोष्ट सुरु भएको छ ।
ऋचा साथीसंगीबीच पनि उत्तिकै मिलनसार रहेको उनीप्रति व्यक्त भएको श्रद्धाभावले पुष्टि गर्दछ । कार्तिक ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म फेसबुकमा एक्टिभ रहेकी उनले एक्कासी किन आत्महत्या गरिन् ? रहस्यमै छ । उनका बारे पनि धेरैलाई थाहा छैन ।
वुमन्स रुम रिलोडेड (डब्लुआरआर) मा सक्रिय सदस्य रहेको कुरा बाहिर फेसबुकमा खुलेको छ । डाक्टर बन्ने उद्देश्यले एमबीबीएस पढ्दै गरेको कुरा जानकारहरुले लेखेका छन् । गत जनवरीमा यमबुद्धले आत्म हत्या गर्दा दुःखित भएकी उनले आज कसरी आत्महत्या गरिन् ?
भाइटीकाको दिन शनिबार मात्रै तीन वटा तस्विर अपलोड गरेकी छिन् । निराशाभाव झल्कन्छ ।
उनले हतोत्साही र निराश भएर मन स्थिर नभएको भावमा अर्को स्टाटस पनि पोष्ट गरेकी थिईन् ।
उनका साथीहरुले निकै दुखित भएर श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिरहेका छन् । ऋचाले आखिर आत्महत्या किन गर्नुपरेको ? सबै अचम्मित छन् ।
चलचित्रकी नायिका भन्दा कम नभएको सुन्दरतामा उनी मख्ख हुन सकिनन् । सबैलाई रुवाउँदै बिदा भईन् । यस्तो उमेरमा अकालमै आफै ज्यान गुमाउनु निकै दुःखको कुरा हो । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ऋचा ।
नेपाल फर्किए साकर अधिकारी उर्फ लिटिल बुद्ध, कन्सर्ट आयोजना गर्ने